Antoine Griezmann: Nacayb Uma Qabo Cristiano Ronaldo
HomeWararka MaantaAntoine Griezmann: Nacayb Uma Qabo Cristiano Ronaldo
Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid, Antoine Griezmann ayaa sheegay inaanay jirin nacayb iyo xumaan uu uurka ugu hayo balse uu ixtiraamo laacibka xulka Portugal iyo naadiga Real Madrid ee Cristiano Ronaldo.
Ronaldo ayaa dhawaan fashiliyey in Griezmann uu ku yidhi “waan ku necbahay” mar ay ku kulmeen huteel ku yaala magaalada Miami ee cariga Maraykanka oo ay labadooduba dalxiis ku joogeen xagaagii dhawaa, laakiin, weeraryahanka xulka France, wuxuu xusay in weedhahaasi uu kula kaftamayay oo ay aad u sheekaysteen.
Labadan ciyaaryahan ayaa dagaal xagga kubbada ahi dhawr jeer dhex maray, naadiyada iyo xulalka labada, iyadoo uu Ronaldo labada dhinacba kaga guuleystay Griezmann – kulamadaas oo kala ahaa, ciyaarii finalka Champions League ee xili ciyaareedkii u dambeeyey iyo koobkii Euro 2016 oo Portaqiisku ka qaaday xulka Faransiiska.
“Ronaldo jaar baanu ahayn, subax kastana gurigayga ayuu soo ag mari jiray,” ayuu Griezmann ku yidhi waraysi uu siiyey majalada L’Equipe.
“Maalin walba markuu i agmarayo si fiican ayaanu isku salaami jirnay. Laakiin sanadkii hore ayaan gurigii ka guuray. Meel sidaas uga fog ma degin ee wali waanu isku dhawnahay. balse sidii hore oo kale joogto iskuma aragno.
“Laakiin, xagaagii ayaanu ku kulanay. Fasaxaygii ayaan ku joogay aniga iyo xaaskayga ayaa wada soconay, waxaanu kula kulanay Cristiano huteel cunto. Waxay ahayd kulan si kadis ah uun ku dhacay ee aan ku tallo gal ahayn. Xagiisa ayaan u dhaqaaqay si aan ugu hambalyeeyo guushii xulkiisa ee Euro 2016 iyo Guushii Madrid ee Champions League-ga.
“Waxaan kula kaftamay inaan Necebahay, Sababtoo ah, waxaa wali sii taagnayd guuldaradii finalka Euro 2016. Laakiin runtu waxay tahay inaanay dareemayn wax mushkilad ah oo aan isaga ka aaminsanahay ama caloosha ugu hayo, anigoo isle, laba jeer oo tartamo waaweyn ah ayuu guuldaro ku gaadh siiyey, saddex gooleyna wuxuu kaa dhaliyey ciyaartii labada kooxood isugu dambeysay . Qadarin iyo ixtiraam aad u sareeya ayaan u hayaa isaga.
“Haddii aan imika carruur ahaan lahaa, Waxaan run ahaan noqon lahaa taageerihiisa , si lamid ah sidaan u taageeri lahaa Lionel Messi, Neymar iyo Paul Pogba.”